Banaan bax lagu dalbanayo maqaamka caasimadda oo ka socda Muqdisho – Radio Muqdisho
Banaan bax lagu dalbanayo maqaamka caasimadda oo ka socda Muqdisho
Banaan bax balaaran oo ku saabsan xuquuqda bulshada degan caasimadda lagu heli lahaa ayaa iminka ka soconaya qeybo ka mid ah magaalada Muqdisho, waxaana dadka isu soo baxay ay sitaan boorar ay ku qoranyihiin halku dhigyo lagu dalbadanayo maqaabka ay caasimadda Soomaaliya yeelaneyso.
Dadka qaar ayaa waxa ay isugu soo baxeen taalada Sayidka, ee ka soo horjeedda xarunta golaha shacabka, waxaana ay sitaan boorar ay ku qoranyihiin “Waa in la helaa xuquuqda Muqdisho” iyo kuwa kale oo aad u badan.
Sidoo kale meelaha ay dadka isugu yimaadeen ayaa waxaa ka mid ah afarta jardiino, aargada km4 iyo taalada daljirka dahsoon ee degmada Boondheere.
Wariyaha Warbaahinta Qaranka Nuur Saciid Tahliil ayaa ku soo waramaya in dadka isu soo baxay ay taageersanyihiin in bulshada caasimadda ku nool ay helaan xuquuqda ay ku leeyihiin maqaamka Muqdisho.
Banaaan baxa ayaa ah mid weli socda.
Howlgallo amni xaqiijin ah oo xalay laga sameeyay degmada Dharkeynley